KATHMANDUTemperature 16.12°CAir Quality137
हामी २७ दिन नै गर्न चाहन्छौँ तर सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ । मिडियाले पनि नाचको समाचार मात्र बनाएर होइन, नाच प्रस्तुत गर्दा आइरहेका चुनौती सम्बन्धित निकायसामु पुर्‍याइदिनुपर्‍यो ।
करिब ४ सय वर्ष पुरानो कार्तिक नाच १२ दिनसम्म चल्छ । १६ कात्तिकबाट सुरु कार्तिक नाचमा ०५५ सालदेखि हिरण्यकश्यप र हिरण्यकश्यपु बनेर किरण चित्रकार नाचिरहेका छन् । उनी कार्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । पढ्नुस् कार्तिक नाचबारे उनीसँग सुनिता लोहनीका ८ प्रश्न :
कार्तिक नाच परम्परा कसरी सुरु भयो ?
१६९७ मा गुरुद्वय हरिवंश उपाध्याय र विश्वनाथ उपाध्यायको सहयोगमा राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले यो नाच सुरु गरेका हुन् । ५ दिनबाट सुरु भयो । सिद्धिनरसिंहका छोरा श्रीनिवास मल्लले १७२३ मा बाठ: प्याख: (लोकनाटक) सहित ७ दिन थपेर १२ दिन चलाए । श्रीनिवासका छोरा योगनरेन्द्र मल्लले यसमा अरु उषाहरण र माधवान लीला नाच थपे । यी दुवै नाच नाच्न थप १५ दिन लाग्छ । यसरी २७ दिन नाच्ने चलन चल्यो । ००६ सालसम्म एवंरीतले यो नाच चल्यो ।
तर ००७ सालको जनक्रान्तिले यो नाच खण्डित हुन पुग्यो र २ दिनको मात्र हुन थाल्यो । बराह र नरसिंह अवतारको नाच मात्र हुन थाल्यो । ३० वर्षसम्म यही क्रम चल्यो । ०३८ सालमा यस नाचलाई पुन: पुरानै स्वरुपमा देखाउन कार्तिक नाच प्रवद्र्धन समिति संस्था खोलियो, जुन ८ दिन चल्थ्यो । ०७१ मा कार्तिक नाच संरक्षण समितिको रुपमा दर्ता गरियो । अहिले यही समितिबाट १२ दिनका लागि कार्तिक नाच सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
हाम्रा पुर्खाको भनाइअनुसार देशको समृद्धि र कल्याणका लागि यो नाच सुरु भएको हो । यो नाचमा कृष्णलीला र लोक नाटक देखाइन्छ । लोक नाटकमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरले मानव अवतार लिई धर्तीमा आई गरेका काम भूत, भविष्य र वर्तमानमा पर्ने असरबारे देखाइन्छ । यो शिक्षाप्रद हुन्छ । पहिले लोकनाटक नेवारीमा र कृष्णलीला मैथिली भाषामा हुन्थ्यो । अहिले सबै नेवारी भाषामा हुन्छ ।
यो नाच लामो–छोटो भइरहनुको मुख्य कारण ?
आर्थिक स्रोतको कमीले हो । कलाकार, वाद्यवादकको कमीले अर्को समस्या थपेको छ । तर आर्थिक समस्या जे भए पनि हामी कलाकारले श्रमदानस्वरुप यो नाचलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । २७ दिनसम्म गरिने यो नाच हरेक दिन फरक देखाइन्थ्यो ।
यो नाचको विशेषता के हो र पात्र चयन कसरी हुन्छ ?
अरुजस्तो अष्टमातृकाको नाच हरेक दिन एउटै गरिन्छ । यसमा भने फरक कथावस्तुमा हरेक दिन फरक नाच देखाइन्छ । साथै, सम्पूर्ण नेवार समुदायले यस नाचमा भाग लिँदै आएका छन् । जस्तो, उपाध्यायले नरसिंह, चित्रकारले हिरण्यकश्यपु, श्रेष्ठले कृष्ण र देवी नृत्य शाक्यले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । हरिवंश उपाध्यायकै सन्ततिले अहिलेसम्म नरसिंह नाच प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अरुले पनि पुर्खाकै कामलाई निरन्तरता दिएका हुन् । मेरा हजुरबुबा हिरण्यकश्यपु बनेर नाच्नुहुन्थ्यो, अहिले मैले नाचिरहेको छु ।
तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
०४७ सालदेखि यो नाचमा प्रवेश गरेको हुँ तर ०५५ बाट मात्र हिरण्यकश्यप र हिरण्यकश्यपु बनेर नाचेको हुँ । सुरु–सुरुमा त डर लाथ्यो । नर्भस पनि भएको थिएँ, नाचको क्रममा त्यसै बेहोस हुँदा । पछि सहज हुँदै गयो । आफ्नो संस्कृति संरक्षणका लागि पनि यो नाच गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।
के कार्तिक नाचमा तन्त्रविधि प्रयोग हुन्छ ?
हो, कार्तिक नाचमा तन्त्रविधि प्रयोग हुन्छ । म हिरण्यकश्यप हुँदा नरसिंहले मलाई मुच्र्छित बनाउँछन् । म साँच्चै बेहोश हुन्छु । मेरा आफन्तले सुरु–सुरुमा अविश्वास गर्थे । तर बेहोश हुँदा मेरो हालत देखेर पछि पत्याए । बराह, नरसिंह र ब्याट पख: जस्ता नाचमा तन्त्रको प्रयोग हुन्छ । हिरण्यकश्यप बनेका बेला व्रत बस्नुपर्छ र नरसिंह बन्नेले त पानीसमेत नखाई व्रत बस्नुपर्छ । अन्य नाच भने सामान्य हुन्छ ।
नाचलाई बजारीकरण गर्न सकिन्न ?
अन्य नाच गर्न सकिन्छ । तर मैले माथि उल्लिखित नाचमा तन्त्रपूजा हुन्छ, त्यसैले यसलाई बजारीकरण गर्न मिल्दैन । बाठ: प्याख: सबैभन्दा चलाख मान्छेको नाटक हो । येले ब्याट: भन्ने हुन्छ, उसले लगाउने नकाब मान्छेकै छाला काटेर बनाएको भन्ने बुझिन्छ । जुँगाका रेखी अहिले पनि देखिन्छ, त्यसमा । यो तान्त्रिक विधिले नै पूजा गर्नुपर्छ । यीबाहेक अन्य नाच भने हामीले बाहिर प्रदर्शन गर्दै आएका छौँ । यस्तै, यी नाचको भाषा फेर्न सकिन्न । यसमा प्रयोग भएका भाषा सबै पुरानै हुन् । त्यसलाई संगृहीत गरिएको हो । अप्सरा नृत्य भने पद्मकन्या क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ र अभ्यास पनि गरिन्छ ।
नाचका लागि सरकारको सहयोग छ कि छैन ?
छ भनुँ कि छैन भनुँ ? छ भनुँ भने पुग्दो छैन । एउटा नाचको जम्मा ३ सय पाउँछन् । ४५ जनाको कलाकार र वाद्यवादनको टोलीलगायत सबै गरेर जम्मा १ सय जनाको टोलीले १२ दिनसम्म निरन्तर कार्तिक नाच गरिरहेका छौँ । हामी २७ दिन नै गर्न चाहन्छौँ तर सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ । मिडियाले पनि नाचको समाचार मात्र बनाएर होइन, नाच प्रस्तुत गर्दा आइरहेका चुनौती सम्बन्धित निकायसामु पुर्‍याइदिनुपर्‍यो ।